Screen-captures | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label Screen-captures. Show all posts
FB မှ ဘော်ဒါ တစ်ယောက် တကူး တက လာတောင်းဆို ထားတဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ။
ကျန်တဲ့ ဘော်ဒါ တွေလည်း အသုံးပြုလို့ ရအောင် အားလုံး အတွက် တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ ပုံလေး
နဲ့ နာမည်လေးကို မြင်တာနဲ့ ဘာ ဆိုတာကို သဘောပေါက် ကြမှာပါ။
အချို့သော ဖုန်းတွေမှာ Screen Shot ရိုက်ရတာ အဆင်မပြေဖူး ဘယ်လို ရိုက်ရမှာလည်း သိပ်မသိ
ဖူး ခေါင်းစားနေတဲ့ ဘော်ဒါတွေ ကတော့ အခု ကျနော် တင်ပေး လိုက်တဲ့ ဆော့ဝဲ လေးကိုသာ မိမိ
ဖုန်း ထဲမှာ အင်စတော လုပ်ပြီး မိမိ ရိုက်လိုတဲ့ နေရာကို စိတ်ကြိုက် ရိုက်ယူ နိုင် မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဗားရှင်း မှာတော့ ထပ်တိုး လာတဲ့ Feature တွေ ကတော့ အများကြီးပါ ကျနော် မရှင်းပြတော့
Official က Screen Shot ရိုက်ပြထားတဲ့ ပုံလေးတွေ ကိုသာ အောက်မှာ လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။
Click on the lower right "shuffle" button to cycle through available frames
Size 7.0M ရှိပါတယ်။
▼ my.pcloud.com ▼ OR ▼ userscloud.com ▼ OR ▼ solidfiles.com ▼
Pyae Phyo (MMiTD) by ဇူးနစ်
ကဏ္ဍ Android, Phone Application, Screen-captures
Video Booth Pro 2.6.4.6 Multilingual
Video Booth Pro 2.6.4.6 Multilingual | 11.53 MB
ကဏ္ဍ Screen-captures, Video-software
ဖုန်းကို လှုပ်လိုက်တာနဲ့ ပုံတွေ ယူပေးမဲ့ Screenshot ER Demo 2.4.3.6.apk
မင်္ဂလာပါ သည် တခါတင်တာ လေးကတော့ မိတ်ဆွေတို့ မရှိမဖြစ် သုံးနေကြတဲ့ screen shot ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍလေး
ဘဲ ဖြစ်ပါတယ် ဒါလေးကို ဖုန်းတွေမှာ ဟိုကီး သည်ကီးတွေ ကလစ် ရိုက်ကြတာ ရှိသလို တခြားသော apk တွေ
လည်း အသုံးပြု ကြပါတယ်..
ဒါလေး ကတော့ အရမ်းကို သက်သာစေပြီး အဆင်ပြေစေ တာလေးမို့ ပြန်လည် မျှဝေ လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်...
လွယ်လွန်းလို့ကို သူကတော့ တဖျတ်ဖျတ်ရိုက်နေလို့ ခက်နေတယ်ဗျာ.. တကယ် တကယ်...လေ့လာလိုက်ပါ
လိုရင်အောက်မှာ ဒေါင်းယူပါနော်... ဖုန်းကို လှုပ် ခါလိုက်တာနဲ့ ပုံရိုက်ပေးပါတယ်ဗျာ။
ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ apk ကို မိမိတို့ဖုန်းမှာ install လုပ်ပြီးတာနဲ့ ဖွင့်လိုက်ပါနော်..အောက်က ပုံလေးအတိုင်းပေါ်
ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း Stop Service ဆိုတဲ့ နေရာလေး ကတော့ အဖွင့် အပိတ်ဖြစ်ပါတယ်... သူ့ကို မလိုအပ်
တဲ့ခါ stop လုပ်ထားပေးလို့ ရပါတယ်.. သုံးမယ် ဆိုရင်တော့ play တချက်ကလစ် ပြန်ပိတ်ပြီး လိုရာပုံတွေကို
ရိုက်တာ ကလည်း အရမ်းလွယ် ပါတယ် ဖုန်းကို တချက် လှုပ်ခါ လိုက်တာနဲ့ ဖျတ်ဆိုပြီး အော်တို ရိုက်ထား လိုက်
ပြီပေါ့... ဒါဆို ပုံလေး မိမိရိုက်တာလေး တက်လာပါမယ် အဲပုံလေးကို တချက် ထိလိုက်တာနဲ့ အောက်တားက စာ
တန်းတွေ တက်လာမယ် ဥပမာ မလိုချင် မသိမ်းနဲ့ လိုချင်ရင် သိမ်းလို့ ရတာပေါ့ ပြန်ရှယ်လို့လည်း ရပါတယ်...
ကဲဒါဆို တော်တော် အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်... စမ်းလိုက်ကြပါ.... မလိုချင်ပိတ်ထားနော်ေိေိ မဟုတ်
ရင် ဖုန်းလေးက လှုပ်ခါတိုင်း တဖျတ်ဖျတ် ပုံတွေ ရိုက်ယူနေမယ်....အိုခေ...
▼ userscloud.com ▼ OR ▼ mediafire ▼ OR ▼ dropbox.com ▼
Webcam.7.Pro.1.4.0.0.Build.41240 + Keygen
ရုပ်ပုံတွေကို အကြည်လင်ဆုံး ဖမ်းယူပေးမဲ့ Webcam လေးပါ။ မိမိ Laptop / Notebook မှာပါတဲ့ Webcam ကို
စိတ်တိုင်း မကျ ဖြစ်နေတဲ့ မိတ်ဆွေများ အတွက် အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်ဗျာ။
အထူး သဖြင့် Laptop ကို အသုံးပြုတဲ့ User တိုင်း လိုအပ်မယ့် Software တစ်ခု ပါဗျာ။ Final Version လေးကို
Full ဖြစ်အောင် Keygen ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Video effects ပေါင်း1,000 ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။ Webcam
ကို အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် Full လေး ဆိုတော့ အဆင်ပြေမှာပါ။
Flash Video (FLV) audio and video recording စသည်တို့ကို အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။ ၀င်းဒိုး အားလုံးမှာ အသုံး
ပြုနိုင်ပါတယ်။ သူရဲ့လုပ်ဆောင် ချက်တွေ များလွန်းလို့ အောက်မှာ သေချာ ဖတ်ကြည့်ပါ။ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ အများ
ကြီးပါ။ ကျွန်တော်တို့ Keygen ဖိုင်ပါတဲ့ အတွက် Keygen ဖိုင်ဖွင့်မယ် ဆိုရင်တော့ Antivirus ကို Disable လုပ်
ဒေါင်းပြီးမှ ဖွင့်မရဖြစ်နေမှာ စိုးလို့ပါ။ Tool ကနေ Open Library Folder နှိပ်ပြီး မိမိပုံတွေ video က အစသွားပြန်
Windows 8 /7/ Vista / XP (32-bit/64-bit) အစရှိတဲ့ OS အားလုံးမှာ အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်ဗျာ။
Webcam7Pro 1.4.0.0 Build 41240 Full + Keymaker isaincredible instrument for working with Web cams that will give any client fast get to your cam without introducing unique server programming. All the essential programming is incorporated specifically into the Webcam7Pro, you just need to arrangeafew settings, for example, the way to the neighborhood index and server port. Notwithstanding feature picture acquired from the web cams, you can utilize the feature that is transmitted over the LAN.
Features of Webcam7Pro 1.4.0.0 Build 41240 Full + Keymaker:
– Supports up to 10 video / webcam
– Lock on the ip address / password patronage
– Definition image quality
– Add effects, even in direct communication
– Supports all USB / PCI-devices and IP-most of based sources
– Local and remote pan, tilt and zoom to – control compatible devices (USB / IP-camera)
– Advanced overlay editor supporting text / images and alpha-blending effects
– Broadcasting HTTP-
– Streaming Windows Media and processing profiles WM9 (including IP-cameras)
– Sending via FTP / FTPS
– Sending via HTTP / HTTPS
– Capturing and recording function (including IP-cameras / ASF-flows)
– Displays the connected users
– Using asasource / repeater ASF-streams (Windows Media)
– Password protection / User Account Control
– Changing the logo / off
– Setting the name and type of page
– Motion Detection + alarm
– DVR (permanent registration, avtostiranie after X hours)
– Detailed logs of activity
– Remote administration (via network)
– The use of IP-based cameras DS-filter JPEG / MJPEG in any application
ဖုန်းမှာ Screenshot ရိုက် ပြီး ဓာတ်ပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေ မှတ်သား ထားပေးမဲ့ ဆော့ဝဲ ကောင်းလေးပါ
အသုံးလိုတဲ့ ဘော်ဒါတွေ အတွက် တင်ပေးလိုက် ပါတယ်ဗျာ အောက်မှာဒေါင်းပါ
**If you can’t get the app to work please email us and don’t post it in the reviews since we can’t respond to reviews.
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, November 28, 2014 No comments:
Screenpresso Pro 1.5.3.0 | 5.87 MB
Screenpresso overrides the Print Screen key and makes it easy to take the best screen captures inafew seconds. It isalight-weight Windows software givingawonderful look to your screenshots for FREE.
ကဏ္ဍ Screen-captures, Window
HyperSnap is the fastest and easiest way to take screen captures from Windows screen and text capture from places where system text copy is not possible.
HyperSnap combines the power ofafirst-class screen capture application with an advanced image editing utility - wrapped into one easy-to-use tool. HyperSnap is perfect for capturing images and texts that you want to include in your Help system, online tutorials, manuals, training handouts, presentations, marketing materials, Web pages, emails and more.
ကဏ္ဍ Portable, Screen-captures
FS ScreenCapture 7.9 Final + Serial (Screen Capture နဲ့ Screen Recorder ဖမ်းနိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲ)
ကွန်ပျူတာ Screen မျက်နှာပြင် ပေါ် Screen Capture ဖမ်း တာတို့ Screen Recorder ဗီဒီယို ဖမ်းတာ တို့ကို
လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ ဆော့ဝဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သုံးရတာ အရမ်း လွယ်ကူပေါ့ပါးပြီး မြန်ဆန်ပါတယ်။ Screen Capture ဖမ်းထားတဲ့ ပုံတွေကို လိုသလိုလည်း
ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ် သေးသေးလေးဖြစ်တာကြောင့် ကွန်ပျုတာ သုံးသူတိုင်း ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးထွက် Version 7.9 ကိုတင်ပေးလိုက်တာပါ။
ဆောဝဲကို ဒေါင်းပြီး စက်မှာ Install လုပ်ပါ ပြီးရင် Resgister ထဲဝင် Text ဖိုင် ကိုဖွင့်ပါ အထဲမှာ User Name
နဲ့ Serial ကို Copy လုပ်ပြီး FS ScreenCapture 7.9 မှာ Paste ချ၍ Resgister လုပ်ပါ
ပြီးရင် Full Version အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
စိတ်ဝင်စားရင် အောက်ကလင့်မှာ ၀င်ဒေါင်းလိုက်ပါ။
screen capture ရိုက်ချင် သူများ အတွက် BSR Screen Recoder
မိမိကွန်ပျူ တာကို screen capture ရိုက်ချင် သူများအတွက် အရည်အသွေး ပြည့်မှီတဲ့ BSR Screen Recoder
လေးကို ပြန်လည်မျှ ဝေ ပေးချင်ပါတယ်။ ကျူ တိုရီယမ် လုပ်ချင်သူများ အတွက် အထူး သင့်လျော်ပါတယ်။
ရုပ်ထွက် လည်း ကြည်လည် ပြတ်သားမှူ့ ရှိတဲ့ အပြင် မိမိနှစ်သက်သလို video တည်းဖြတ် တာလည်း လုပ်နိုင်
ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ် ကတော့ ( 27MB ) ရှိ ပါတယ် Full Version အသုံးပြု လို့ရအောင် series keys ပါထည့်သွင်း
series keys ထည့်တာကတော့ လွယ်ပါတယ် BSR Screen Recoder ရဲ့ option / about / buy ဆိုတဲ့နေရာ
လေး မှာ ထည့်သွင်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြု မယ်ဆို ရင်အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါ။
အောက်မှာ series keys ထည့်ဖို့အတွက် screen shoot ပုံလေးတွေ ကိုပါဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
(Ref Ko Sai thu)
Shake လုပ်ရုံနဲ့ Screen Shot ရိုက်ယူပေးမယ့် - Screenshot Ultimate Pro v2.9.18 Apk
ဖုန်းပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ ပုံရိပ်များကို Screen Shot ရိုက်ယူ ပေးနိုင်မယ့် Application လေး တစ်ခု တင်ပေး
လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Phone တွေမှာ Power + Volume Down နဲ့ Screen Shoe ရိုက်ယူ ပေးနိုင်တယ်
ဆိုပေမယ့် အခုတင်ပေး လိုက်တဲ့ App: ကတော့ ဖုန်းကို Shake လှုပ်ခါလိုက်ရုံနဲ့ ဒါမှမဟုတ် Icon ပေါ်
မှာ Touch တစ်ချက် နှိပ်လိုက်ရုံဖြင့် လွယ်ကူစွာနဲ့ ပုံရိပ်များကို ဖမ်းယူပေးနိုင်မှာပါ။
ဒါ့အပြင် ရိုက်ထားပြီးသား Screen Shot များပေါ် တွင်လည်း မိမိရေးသားလိုသည့် အကြောင်းအရာများ
ရေးသားနိုင်ခြင်း ၊ မဖော်ပြလိုသည့် အစိတ်အပိုင်းများ ကိုလည်း အရောင်များဖြင့် ဖုံးကွယ်ထားနိုင်ခြင်း
တို့ အပြင် အခြားသော လုပ်ဆောင်ချက် များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။
အသေးစိတ်ကိုတော့ အောက်မှာ ဆက်လက်လေ့လာနိုင် ပါတယ်ဗျာ။
Android OS 2.1 နှင့် အထက် ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။